Lasopy namboarina ho an'ny alika | Alika Manerantany
Viviana Saldarriaga | | Fahano alika sy alika kely, Alika ankapobeny
Androany, maro ny olona no mamela ny fahazarana mihinana ny biby fotsiny. Ary io dia tahaka ny mahasasatra antsika olombelona mihinana zavatra mitovy hatrany, dia alika koa. Noho io antony io dia tsara ny manome azy ireo a Famahanana isan-karazany, izay misy sakafo sy karazan-tsakafo mifantoka hafa, sa maninona?, lasopy namboarina nomaninay.
Ireto lasopy ireto, ankoatry ny mahavelona azy, dia hanome ny sakaizantsika mahatoky ireo otrikaina ilaina mba hiasa tsara ny vatany ary hijanona ho salama sy ho voky foana. Na dia aleon'ireo alikanay foana aza ny sakafo mafy, na novidina na natao tao an-trano, indraindray dia mety mila misakafo izy ireo vokatra malefaka, na noho ny olana ara-pahasalamana, tsy fahampian'ny nify, na aretina hafa manakana anao tsy hitsako.
Para manaova lasopy matsiro ho an'ny biby kelinaoTsy maintsy asiana sakafo mahasalama sy mety ho azy ireo ianao, noho io antony io no anoloran-tsika ny vokatra toy ny hena mahia, ny legioma toy ny voatavo, karaoty ary ovy. Tadidio fa tsy tokony hanampy karazana zava-manitra ianao, toy ny tongolo na tongolo lay, satria mety hanimba ny fahasalaman'ny biby izany. Fa kosa afaka manampy oatmeal kely ianao, vary na katsaka.
Raha vantany vao masaka tsara ireo akora rehetra ireo dia ilaina ny manafangaro azy ireo mba hanomezana azy ireo fitoviana mahafinaritra kokoa ho an'ny biby kelinao. Amin'izany fomba izany dia hahazo a sakafo mahavelona sy mahasalama tokoa homena ny alikanao, amin'ireny fotoana ireny fa sarotra ho azy ny mitsako. Tadidio fa ity lasopy vita an-trano ity dia tokony hafanainao kely kokoa noho ny maripanan'ny efitrano, fa aza mafana be mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Lasopy namboarina ho an'ny alika
Mora Fernando Parada dia hoy izy:
Misaotra betsaka Mundo Perros amin'ny torohevitra ho an'ireo volonay.
Valiny tamin'i Fernando Mora Parada
Azafady amin'ny lasopy natao ho an'ny puppy dia azonao atao ny manisy sira kely
Aretina maso amin'ny alika: Glaucoma
Fitondra-tena ny Collie sisintany